भारतीय अभिनेता अक्षय कुमारले नेपालीलाई किन यस्तो संदेश पठाए ? – Karnalikhabar
भारतीय अभिनेता अक्षय कुमारले नेपालीलाई किन यस्तो संदेश पठाए ?
काठमाडाैं : बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले नेपाली दर्शकका लागि आफ्नाे आउन लागेकाे फिल्मले भरपुर मनोरञ्जन दिने सन्देश पठाएका छन् । आउँदो शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म ’बच्चन पाण्डे’ ले भरपुर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उनले सन्देशमा बताएका छन् । ’नमस्ते नेपाल, मेरो फिल्म बच्चन पाण्डे यहिँ १८ मार्चमा नेपालका हलहरूमा लाग्दैछ । म यो फिल्मलाई तपाइँ आफू आफ्ना साथी तथा परिवारहरूसँग हेर्न आग्रह गर्दछु । यो फिल्म राम्रो बनेको छ भने पूर्णरुपमा कमर्सियल छ । मलाई विश्वास छ । यसले तपालाई भरपुर मनोरञ्जन दिनेछ’ अक्षयले भिडियोमा भनेका छन् ।
अभिनेता अक्षय टाइटल रोलमा रहेको फिल्म ‘बच्चन पाण्डे’ मा देखिएको उनको लुक्सलाई फिल्मप्रेमीले तारिफ गरेका छन् । एक्सन र कमेडी मिक्स फिल्ममा अक्षयसँगै अरशद वारसी , कृति सेनन, ज्याक्लिन फर्नान्डिज , पंकज त्रिपाठी लगाएतको अभिनय रहेको छ । फरहाद साम्जीको निर्देशनमा बनेको यस फिल्मलाई नाडियाडवाला ग्रान्डसन इन्टरटेन्मेन्ट प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण गरिएको हो ।
अघिल्लो - होलीकै दिन शोकमा डुब्यो पुरै गाउँ, दुई जवान युवकको मृत्यु
पुटिनको आलोचना गर्ने २३ बर्षिया मोडलको शव सुटकेसमा भेटियो ! - पछिल्लो